Home Wararka Dowlada Puntland oo dardar-galinaysa aruurinta canshuuraha bariga
Dowlada Puntland oo dardar-galinaysa aruurinta canshuuraha bariga
Dowlad Goboleedka Puntland ayaa sheegatay in dardar-galinayso aruurinta canshuuraha bariga. Wasiirka Maaliyadda DG Puntland Xasan Shire Abgaal ayaa Ganacsatada ka dalbaday in ay bixiyaan canshuurta ku waajibta, waxa uu digniin u diray shaqsiyaadka ka dhega adeegaya fulinta amarka kasoo baxay.
Wasiirka ayaa mas’uuliyad darro ayuu ku tilmaamay in Ganacsatadu ay bixin waayaan lacagta Canshuur ah ee ku waajibtay iyaga oo hanti heysta sida uu hadalka u dhigay Wasiirka Maaliyadda DG Puntland Xasan Shire Abgaal. Wasiir Xasan Waxa uu ku hanjabay in awood loo adeegsan doono qofkii diida bixinta Canshuurta maadaama lacagtaas wax looga qabanayo arrimaha Amniga, Waxbarashada & howlo kala duwan.
“Waa ceeb in Dad wax kusoo bartay canshuur Dalka in maanta hantidooda ay ka bixin waayaaan canshuurta lagu leeyahay, waa qasab in qofka diida arrintaan tallaabo laga qaado” Waa sida uu yiri Wasiirka Maaliyadda DG Puntland Xasan Shire.